John McFee on March 5, 2009
လာဖတ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ဘာသာ မို့လို့ရယ်။ နာမည်ကြီးဘလော့ဖြစ်ရဲ့နဲ့ဘယ်သူက မှ ကွန်မက် သိတ်မရေးဘဲနဲ့ကိုယ်က နားမလည်ဘဲနဲ့ လာလာရေးနေရင် အမြင်ကပ်စရာတွေဖြစ်မှာ စိုးလို့ ဘာမှ မပြောဘဲပြန်သွားလေ့ရှိပါတယ။် ကျေးဇူးပါ။
kom on March 6, 2009
အဲဒိလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး အစ်မရေ … နာမည်လဲမကြီးပါဘူး။ လာဖတ်တာကိုပဲ ကျွန်တော်က ပြန်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ အခု comment အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ။
Myo Kyaw Htun on March 10, 2009
Ko Myo Kyaw Htun, thank you for this information. It’d be very useful. :) Hey, John .. I thank you for your link also. Take care.
Nanda on May 12, 2009
RAJ on September 1, 2010